Fandraisan'anjaran'i EmausBot - Wikipedia
De EmausBot dinika Laogim-panakanana fampidiram-pejy laogy laogiim-panararaotana
13:2314 Mey 2022 à 13:23 Fampitahana tant. −2‎ k Betsiboka ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Faritra Betsiboka ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée Révocation manuelle PAWS [2.1]
20:3220 Febroary 2022 à 20:32 Fampitahana tant. −10‎ k Mpikambana:Vit Koz ‎ Rôbô : Fanitsiana fihodinana diso mankany amin'ny pejy tanjona Mpikambana:Brubaker610 nafindra ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée
10 Febroary 2022
21:4010 Febroary 2022 à 21:40 Fampitahana tant. 0‎ k Torah masoretika ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Lahatsoratra Masôretika ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
21:4010 Febroary 2022 à 21:40 Fampitahana tant. 0‎ k Soratra masoretika ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Lahatsoratra Masôretika ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
21:4010 Febroary 2022 à 21:40 Fampitahana tant. +1‎ k Soratanam-piraketana tao Komràno ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Soratanam-piraketan' ny Ranomasina Maty ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
21:4010 Febroary 2022 à 21:40 Fampitahana tant. +1‎ k Soratanam-piraketan'i Komràno ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Soratanam-piraketan' ny Ranomasina Maty ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
21:3910 Febroary 2022 à 21:39 Fampitahana tant. +1‎ k Sora-tanana tao amin'ny Ranomasina Maty ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Soratanam-piraketan' ny Ranomasina Maty ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
21:3910 Febroary 2022 à 21:39 Fampitahana tant. 0‎ k Lahatsoratra masoretika ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Lahatsoratra Masôretika ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
21:3910 Febroary 2022 à 21:39 Fampitahana tant. +2‎ k Kôrintianina faharoa ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Epistily faharoa ho an' ny Kôrintiana ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
21:3910 Febroary 2022 à 21:39 Fampitahana tant. +2‎ k Korintiana faharoa ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Epistily faharoa ho an' ny Kôrintiana ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
21:3910 Febroary 2022 à 21:39 Fampitahana tant. 0‎ k Kodeksa masoretika ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Lahatsoratra Masôretika ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
21:3910 Febroary 2022 à 21:39 Fampitahana tant. +1‎ k Horonan-tsoratra tao amin'ny Ranomasina Maty ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Soratanam-piraketan' ny Ranomasina Maty ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
21:3810 Febroary 2022 à 21:38 Fampitahana tant. +1‎ k Distrikan'i Betioky Sud ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Distrikan' i Betioky-Atsimo ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
21:3810 Febroary 2022 à 21:38 Fampitahana tant. +1‎ k Distrikan'i Ampanihy ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Distrikan' Ampanihy ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
21:3810 Febroary 2022 à 21:38 Fampitahana tant. 0‎ k Baiboly masoretika ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Lahatsoratra Masôretika ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
17 Janoary 2022
00:4117 Janoary 2022 à 00:41 Fampitahana tant. +1‎ k Dinika:Toliara ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Dinika:Faritanin' i Toliara ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
00:4117 Janoary 2022 à 00:41 Fampitahana tant. +1‎ k Toliary ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Faritanin' i Toliara ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
00:4117 Janoary 2022 à 00:41 Fampitahana tant. +1‎ k Konsily Vatikana II ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Kônsily Vatikàna II ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
00:4117 Janoary 2022 à 00:41 Fampitahana tant. +1‎ k Faritanin'i Toliary ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Faritanin' i Toliara ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
00:4117 Janoary 2022 à 00:41 Fampitahana tant. +1‎ k Faritanin'i Antsiranana ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Faritanin' Antsiranana ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
00:4017 Janoary 2022 à 00:40 Fampitahana tant. +1‎ k Faritan'i Toliary ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Faritanin' i Toliara ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
00:4017 Janoary 2022 à 00:40 Fampitahana tant. +1‎ k Faritan'i Toliara ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Faritanin' i Toliara ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
14 Janoary 2022
00:0114 Janoary 2022 à 00:01 Fampitahana tant. +1‎ k Tantaran'ny firenenana malagasy ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Tantaran' i Madagasikara ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
00:0114 Janoary 2022 à 00:01 Fampitahana tant. +4‎ k Tambanosy Kômôro ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Tamba-nosin' i Kômôro ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
00:0114 Janoary 2022 à 00:01 Fampitahana tant. 0‎ k MDRM ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
00:0114 Janoary 2022 à 00:01 Fampitahana tant. 0‎ k M.D.R.M. ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Mouvement Démocratique de la Rénovation Malgache ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
5 Janoary 2022
06:465 Janoary 2022 à 06:46 Fampitahana tant. −55‎ k HEC Paris ‎ Nanala rohy interwiki 1 izay efa omen'i Wikidata eo amin'i d:Q273535 ankehitriny
01:395 Janoary 2022 à 01:39 Fampitahana tant. +1‎ k Mpikambana:オムジー ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Mpikambana:Shōten ＆ VTuber are best ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
01:395 Janoary 2022 à 01:39 Fampitahana tant. +1‎ k Mpikambana:Shōten is best ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Mpikambana:Shōten ＆ VTuber are best ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
01:395 Janoary 2022 à 01:39 Fampitahana tant. +1‎ k Mpikambana:John oliver lover ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Mpikambana:Shōten ＆ VTuber are best ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
21:3428 Desambra 2021 à 21:34 Fampitahana tant. +1‎ k Fénérive Est ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Fenoarivo Atsinanana ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
21:3428 Desambra 2021 à 21:34 Fampitahana tant. +1‎ k Fénoarivo Est ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Fenoarivo Atsinanana ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
26 Desambra 2021
01:0126 Desambra 2021 à 01:01 Fampitahana tant. +1‎ k Protevanjelin'i Jakoba ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Prôtevanjelin' i Jakoba ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
01:0126 Desambra 2021 à 01:01 Fampitahana tant. +1‎ k Filazantsaran'i Jakoba ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Prôtevanjelin' i Jakoba ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
01:0126 Desambra 2021 à 01:01 Fampitahana tant. +1‎ k Evanjelin'ny Fahazazana araka an'i Jakoba ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Prôtevanjelin' i Jakoba ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
23 Desambra 2021
00:0823 Desambra 2021 à 00:08 Fampitahana tant. −3‎ k Madiro ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Madilo ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
00:0823 Desambra 2021 à 00:08 Fampitahana tant. −3‎ k Kily ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Madilo ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
20 Desambra 2021
00:0320 Desambra 2021 à 00:03 Fampitahana tant. +1‎ k Dinika:Josefa (zanak'i Jakoba) ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Dinika:Jôsefa (zanak' i Jakôba) ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
00:0220 Desambra 2021 à 00:02 Fampitahana tant. +1‎ k Zefania (boky) ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Bokin' i Zefania ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
00:0220 Desambra 2021 à 00:02 Fampitahana tant. +1‎ k Tsodranon'i Moizy ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Tsodranon' i Mosesy ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
00:0220 Desambra 2021 à 00:02 Fampitahana tant. +3‎ k Tononkiran'i Debora ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Hiran' i Debôrà ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
00:0220 Desambra 2021 à 00:02 Fampitahana tant. +1‎ k Tola ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Tôlà ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
00:0220 Desambra 2021 à 00:02 Fampitahana tant. +1‎ k Tantara voalohany ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Boky voalohan' ny Tantara ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
00:0220 Desambra 2021 à 00:02 Fampitahana tant. +1‎ k Tantara faharoa ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Boky faharoan' ny Tantara ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
00:0120 Desambra 2021 à 00:01 Fampitahana tant. +1‎ k Sofonia (boky) ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Bokin' i Zefania ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
00:0120 Desambra 2021 à 00:01 Fampitahana tant. +1‎ k Samoela voalohany ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Boky voalohan' i Samoela ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
00:0120 Desambra 2021 à 00:01 Fampitahana tant. +1‎ k Samoela faharoa ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Boky faharoan' i Samoela ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
00:0120 Desambra 2021 à 00:01 Fampitahana tant. +1‎ k Samoela (boky) ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Bokin' i Samoela ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
00:0120 Desambra 2021 à 00:01 Fampitahana tant. +1‎ k Salamo (boky) ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Bokin' ny Salamo ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
00:0120 Desambra 2021 à 00:01 Fampitahana tant. +1‎ k Salamo (Boky ao amin'ny Baiboly) ‎ Rôbô : mamaha olam-pihodinana mankany amin'i Bokin' ny Salamo ankehitriny Marika: Cible de la redirection modifiée PAWS [2.1]
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:Fandraisan%27anjara/EmausBot"